ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးရတာ အချိန်တအားပေးရတယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်လ်သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်ထွန်း | Popular
မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင်ထက်ထက်ထွန်းက လတ်တလောမှာ ‘အကြင် နာမြစ်ဖျား’ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကို ဒါရိုက်တာသားညီနဲ့ ပါဝင်ရိုက်ကူးနေတယ် လို့ သိရပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်အသစ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာ အခက်အခဲတွေရှိနေလားလို့ မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာ တော့ ထက်ထက်ထွန်းက….
”ထက် အခုရိုက်ကူးနေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကတော့ ‘အကြင်နာမြစ်ဖျား’ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကိုမိုးယံဇွန်တို့၊ ထူးအောင်တို့နဲ့ တွဲရိုက်ကူး ရမှာပေါ့။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ ထက်ရဲ့ကာရိုက်တာကထက်က ကိုမိုးယံ တအားကြိုက်တဲ့အခန်းက သရုပ်ဆောင်ရမှာ။ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်ကူး တာက အဓိကကတော့ အချိန်တအားပေးရတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုဇာတ်လမ်းတွဲ ကတော့ တစ်လနဲ့အပြတ်ရိုက်မယ်လို့တော့ပြောတယ်။ ရှေ့တစ်ခေါက် ဇာတ်လမ်း တွဲက ၆ လကျော်လောက်အချိန်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက် အခြားသော စီးပွား ရေးပိုင်း၊ လုပ်ငန်းပိုင်းတွေမှာလည်း အများကြီးထိခိုက်တာရှိသလို တခြား ဒီဓာတ်ပုံရိုက်၊ ကြော်ငြာရိုက်၊ တခြား Presenter ပိုင်းတွေလည်း အကုန် လွတ်ကုန်တာတွေတော့ဖြစ်တယ်။ တစ်ဖက်တည်းကိုပဲ ခြောက်လလောက် အချိန်ပေးရတဲ့အခါကျတော့ ပရိသတ်တွေ လက်ထဲလည်း ၆ လအတွင်း ကိုယ့်ရဲ့ Activities တွေ ရောက်မလာဘူး။ ၆ လလောက် ပျောက်သွားတဲ့ အခါကျတော့ ဒီဘက်ကို မနည်းပြန်လိုက်ရတယ်။ ပြန်လုပ်ရတဲ့ဟာတွေ လည်းရှိတယ်။ ရိုက်ကူးပြီးသွားတော့လည်း ဒီဇာတ်လမ်းတွဲထွက်လာ ဖို့ကိုပဲ မျှော်နေရတာကထက်တို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလိုပေါ့”လို့ ဆိုပါတယ်။
သူ့ရဲ့ကြိုးစားထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေ အပေါ်မှာ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ ထက်ထက် ထွန်းက….
”အချိန်တွေလည်း တအားပေးထားတယ်။ တအားလည်း ကြိုးစားထားတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုရလဒ်ကိုလည်း ဒီဇာတ်လမ်း တွဲထွက်ရှိလာတဲ့ အချိန်ကျရင် ပရိသတ်ရော၊ အနုပညာနယ် ပယ်ထဲက လူတွေရော၊ ကြည့်ရှုပြီးတော့ ဝေဖန်မယ့်အသံလေးတွေ သုံးသပ်ချက်လေးတွေကို ထက်စောင့်နေတာပေါ့။ ထက်အနေနဲ့ လည်း ထက်ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေအပေါ် ကိုယ့်ရဲ့ စီနီယာတွေက လည်း သုံးသပ်ပေးစေချင်တယ်”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။